Foara “Mionjo” – Faritra Boeny : manatsara ny fizahantany sy ny famokarana | NewsMada
Foara “Mionjo” – Faritra Boeny : manatsara ny fizahantany sy ny famokarana
Fizahantany ho an’ny fampandrosoana maharitra. Io ny lohahevitra nomena ny foara ara-toekarena “Mionjo” andiany fahatelo any amin’ny faritra Boeny ny faran’ny herinandro lasa teo. Tetikasa ho fanatanterahana ny politikam-pirenena momba ny fampandrosoana mifanaraka amin’ny maha tanànan’ny fizahantany an’i Mahajanga sy ny faritra Boeny manontolo.
Saika manana toerana manintona mpizahatany avokoa ireo distrika mandrafitra ny faritra, indrindra amin’ny fizahantany ekolojika. Manomboka mampiroborobo ny fizahantany any ambanivohitra koa izao ny kaominina amin’ny alalan’ny fampidirana io sehatra io ao anatin’ny Drafitra ifotony fanajariana ny tany (Schéma d’aménagement communal). “Foara izay natao ho vovonana iray hampisehoana taratra ny harena sy ny zava-misy eto Boeny izany, ho fampihaonana sy fifanakalozan’ny vondron’ny mpamokatra sy ny vondron’ny mpanangom-bokatra ary ny mpanjifa”, hoy ny lehiben’ny faritra Boeny, Saïd Ahamad Jaffar. Tanjona ny hoe tsy mandalo fotsiny ny fihaonambe toy izany fa mba misy soritsori-piaraha-miasa na fifanekem-piaraha-miasa avy hatrany eo amin’ny tantsaha sy ny mpandraharaha nandray anjara, na nitsidika.
Raha 100 ny mpandray anjara tamin’ny andiany voalohany, tafakatra 150 tamin’ny faharoa ary maherin’ny 200 izy tamin’ity andiany fahatelo ity. Tena nisongadina nandritra ny foara ireo vokatry ny fambolena mampalaza ny faritra, ohatra, ny lojy sy voanjo ; fiompina tantely sy tilapia ; vokatry ny jono (akamba sy lamatra). Hita tamin’io fotoana io koa ny asa tanana ataon’ireo vondron’ny tantsaha vehivavy, anisan’izany ny lamba voatenona amin’ny landy be, nalaina amin’ny ala honko ao amin’ny kaominina Boanamary, Mahajanga II.
Nisy tamin’io fotoana io koa ny fifaninanana vokatra mendrika. Nomena mari-pankasitrahana sy amboara ireo mpamokatra nandresy tamin’ny famaranana ny fotoana, ny 3 septambra 2016.